Diyaaradaha Turkey-ga oo duqeymo ka fuliyay bartilmaamneedyo ku yaalla gudaha Syria – The Voice of Northeastern Kenya
Diyaaradaha Turkey-ga oo duqeymo ka fuliyay bartilmaamneedyo ku yaalla gudaha Syria
Ciidamada Milatariga ee dalka Turkeyga ayaa fuliyay duqeymo xoogan oo ay diyaaradohooda dagaalka u geysteen bartilmaameedyo ku yaalla gudaha dalka Syria.
Goobaha la duqeeyay oo ku yaalla waqooyiga Syria ayaa ah fariisimo ay leeyihiin xoogaga xisbiga kurdiyiinta ee loo yaqaanno YPG iyo dagaalyahannada kooxda la magic baxday dowladda Islamaka ee ISIL.
Milatariga Turkeyga ayaa sidoo kale madaafiic hoobiyeyaal ah ku garaacay saldhigyada kooxda Daacish eek u yaalla magaalada u dhow xadka Syria iyo Turkey-ga ee Jarablus iyo sidoo kale fariismiyaha dagaalyahannada kooxda YPG ee magaalada dhinaca waqooyi ugu dhow dalka Turkeyga ee Manbij.
Saldhigyada xoogaga Kurdiyiinta ee YPG ayaa duqeymaha lala beegsaday ilaa 20 jeer, halka duqeymaha ka dhanka ah kooxda Daacish ay iyagana wali socdaan, sida uu sarkaal ka tirsan Milatariga Turkey u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters.
Xukuumadda Ankara ayaa horay u soo saartay qeylo dhaan ay ku muujineyso khatarta ay ku yihiin dagaalyahannada kooxda Kurdiyiinta YPG ee taageerada ka heysta Mareykanka, iyagoo u arka sida kooxda PKK oo dowladda Turkey-ga la dagaalameysay tan iyo sanadihii 1980-meeyadii, si ay xornimo ugu helaan gobollada Kurdiyiinta ee dalka Turkey-ga.
Horaantii bishaan ayey ahayd markii ay xoogaga YPG oo ay hawada ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee xulafada Mareykanka ay magaalada Minhaj ka saareen kooxda ISIL oo markii hore ku sugneyd halkaasi.
← Baarlamaanka Libya oo kalsoonida kala noqday Dowladda ay Qaramada Midoobay Taageerto
Warar dheeri ah oo ka soo baxeya isku dhacyo shalay ka dhacay Migori →